maxim — orderataxi 3.7.7 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.7.7 လြန္ခဲ့ေသာ4ရက္က
Application မ်ား ကား & ယာဥ္မ်ား maxim — orderataxi
maxim — orderataxi ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကိုအဆင်ပြေဝန်ခံဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကဒေါင်းလုပ်လုပ်ကာတက္ကစီနှင့်အခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအမိန့်ကစတင်သုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကွဲပြားခြားနားသောနှုန်းထားများ။ City နှင့်အချင်းချင်းခရီးစဉ်တစ်ဦးမီးရထားဘူတာရုံမှဒါမှမဟုတ်လေဆိပ်မှ trips ။ ငွေသားသို့မဟုတ်ကဒ်အားဖြင့်ငွေပေးချေ။ လျှော့စျေးနဲ့ပရိုမို codes တွေကို။
2003 ကတည်းကကျနော်တို့ကဝန်ဆောင်မှုပိုပြီးခေတ်မီသုံးစွဲနိုင်ခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံစေသည့်ဆန်းသစ်သောတက္ကစီအမိန့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးဆဲပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုမြို့ခရီးစဉ်နှင့်နယ်လှည့်အောင်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့ပိုက်ဆံကယ်ဖို့လူသန်းပေါင်းများစွာကူညီပေးသည်။
သငျသညျနေ့တိုင်းတစ်ဦးစျေးပေါတက္ကစီလိုအပ်လျှင်, «စီးပွားရေး»မှုနှုန်းကိုအသုံးပြုပါ။ သငျသညျနှစျသိမျ့တန်ဖိုးထားလျှင်, «နှစ်သိမ့်»မှုနှုန်းကိုရွေးချယ်ပါ။ ငါတို့သည်လည်းမီနီဗန်အပါအဝင်, ဘတ်စ်ကား, ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးပို့ဆောင်ရေးရှိသည်။
သင်သည်သင်၏ကုန်ကျစရိတ်စီစဉ်များအတွက်အသုံးဝင်သည်ဖြစ်သော«အမိန့်» button ကိုနှိပ်ခြင်းမပြုမီခရီးစဉ်စျေးနှုန်းမြင်နိုင်ပါသည်။ သငျသညျကိုသာနိုင်ရန်အတွက်သတ်မှတ်ထားသောကြသည်မဟုတ်သောအရာများအတွက်အပိုဆောင်းပေးဆောင်ရသည့်အသွားအလာအခြေအနေအကြောင်းမစိုးရိမ်ပါနဲ့။
ဒါဟာအတွက်ငွေသားနှင့်ကဒ်အားဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးဟာခရီးစဉ်များအတွက်ဆပ်ဖို့အဆင်ပြေပါတယ်။ သငျသညျကော်ပိုရေးရှင်းသို့မဟုတ်မိသားစုခရီးစဉ်များအတွက်အခါတိုင်းလိုအပ်သော refilled သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်ကိုသုံးနိုင်သည်။
သင်တစ်ဦးအထူးနှုန်းများ code ကိုသုံးပါလျှင်သို့မဟုတ်သင်တို့သည်ငါတို့၏ဝန်ဆောင်မှု၏ပုံမှန်ဖောက်သည်များမှာပါလျှင်၎င်းသည်ခရီးစဉ်အပေါ်တစ်ဦးလျှော့စျေးရရန်လွယ်ကူသည်။
သင်နှင့်«ဘယ်မှာမှ»လိပ်စာလယ်ကွင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်မြို့မြေပုံကိုသုံးပြီး« မှစ. »ထဲမှာဖြည့်ဆည်းခြင်းဖြင့်ခရီးစဉ်အမိန့်ပေးနိုင်သည်။ သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းများ၏တည်နေရာခြေရာခံတဲ့ function ကိုသုံးနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်များအတွက်ဆန္ဒ, သင်လိုအပ်သောဖြည့်စွက်စေနိုင်သည်သင့်ဖုန်းမှပေမယ့်အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဦးတက္ကစီဖို့, အိတ်, အခြားအဆက်အသွယ်ဖုန်းနံပါတ်တိရိစ္ဆာန်များကလေးများအပေါ်သတင်းအချက်အလက်များကိုသတ်မှတ်။
ခရီးစဉ် rating ယာဉ်မောင်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုအကျိုးသက်ရောက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုတိုးတက်စေရန်ကူညီပေးသည်။
ရုရှား, အဇာဘိုင်ဂျန်, အာမေးနီးယား, ဘီလာရုစ်, ဘူလ်ဂေးရီးယား, ဂျော်ဂျီယာ, အင်ဒိုနီးရှား, အီတလီ, ကာဇက်စတန်, Kirghizia, မလေးရှား, မွန်ဂိုလီးယား, ဆိုက်ပရပ်စ်သမ္မတနိုင်ငံ, Tajikistan, ဥဇဘက်, ယူကရိန်း, မွန်တီနီဂရိုး, ချက်သမ္မတနိုင်ငံ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုပြီးသားမော်စကို, Volgograd, Yekaterinburg, Kaliningrad, Irkutsk, နိုဒါကို, Novosibirsk, Omsk, စိန့်ပီတာစဘတ်, အယ်လ်မတီ, Astana, Petropavlovsk, Poltava, Khrarkiv, Sumi, Brest, Mogilev, Vitebsk အဖြစ်ကမ္ဘာ၏ထိုကဲ့သို့သောမြို့ကြီးများအတွက်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီး, Batumi, Tbilisi, Gori, Varna, Plovdiv, ဆိုဖီယာ, Khujand, ဘာကူ, Sumqayit, Ganja, ဘီရှ်ကတ်, ဂျကာတာ, Denpasar, မီလန်, စန်တီယာဂို။
maxim — orderataxi အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
maxim — orderataxi အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
maxim — orderataxi အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
maxim — orderataxi အား အခ်က္ျပပါ
my12345 စတိုး 861 1.05M
maxim — orderataxi ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
ေနာက္ထပ္ ကား & ယာဥ္မ်ား အက္ပ္မ်ားကို ၾကည့္မည္
APK အေၾကာင္း maxim — orderataxi အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.7.7
ထုတ်လုပ်သူ Get Taxi - GetTaxi – taxi cab app
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://taximaximapp.com/privacy
App Name: maxim — orderataxi
Release date: 2019-09-12 18:26:08
လက်မှတ် SHA1: E0:37:80:07:2E:01:BA:EC:41:7B:65:BB:EA:F2:6D:52:9D:12:ED:AC
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Taxsee
အဖွဲ့အစည်း (O): Taxsee
နယ်မြေ (L): Kurgan
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Kurgan
maxim — orderataxi APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ